irayisi encinci yokufa okushiyekayo ethengiswa kumthengisi wase-China umthengisi-umhluzi we-pellet
Amandla:55KW izigaba ezithathu
Umthamo:3000-4000kg / h
Ubungakanani bokugqibela beepellets:1.5-15mm
Isetyenziselwe:ukwenza ukutya kwenkukhu,ukutya kweenkomo,ukutya kwemfuyo,ukutya kweentlanzi
Iimpahla ezingekasilwa:amazimba,umgquba,isidlo sangokuhlwa,alfalfa,irayisi husk,njl
Iring die pellet mill isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yokwenza iipellets kunye nomgca omkhulu wemveliso yeepellets. Umatshini wokugaya i-rind die pellet unemilo ebanzi yecylindrical kwaye umntu ofayo uthe nkqo. Ngenxa yeendleko zayo eziphezulu kunye nobukhulu obukhulu, ayiqhelekanga njengombala we-pole die pellet. umatshini omncinci wokufa i-pellet mill uhlala uqhele ukwenza amashishini e-pellets kunye nezinye iinjongo zentengiso.Njengomenzi ongumchwephesha waseTshayina kunye nomthengisi wezixhobo ezincinci zerhasi yokufa, Ngaphandle kweringi esemgangathweni zifefa iimayile zepellet, sikwabonelela ngeringi efayo kunye nabaqengqelekayo abenziwe kuthi kwaye badibanise ngokuthe ngqo iifestile zethu zeringi yokufa. Ke ngoko, Awunyanzelekanga ukuba ube nexhala lokuba ungakufumana njani ukufa okufaneleyo, Iimbaleki kunye nezinye iindawo ezinxibileyo.
Kutheni ibizwa ngokuba yiRing die pellet mill?
Isizathu kukuba eyona nto iphambili yalomatshini omncinci wokufa i-pellet mill isangqa esisangqa, ebizwa ngokuba "kufa". kwaye zikho 2 abajikelezi ngaphakathi kwendandatho ukuze bajikeleze kwaye bakhuphe i-biomass embindini ukuya kwimingxunya yokufa kwaye i-cylindrical pellets zenziwa.
Iimpawu ze-Wood Ring Die Pellet Mill
1. I-drive enkulu yamkela ukuqhuba okuphezulu kwegiya, kunye nemveliso malunga 20% ingaphezulu kwe drive yebhanti, kwaye umntu ofayo wamkela izinto ezisuswayo ngokukhawuleza.
2. Inxalenye yomatshini oquka umatshini wokwenza ubungakanani bomgangatho ophezulu weebhere zeSKF ezenziwe eSwitzerland, eziqinisekisa ukuqhuba okuphezulu nokuqhuba ngokungagungqiyo ngengxolo ephantsi.
3. Isixhobo sokondla esifunekayo samkelwa, okwenza ukuba umatshini usebenze kakuhle njengesixhobo esenziwe ngokhuni, umbona, ingqolowa, kunye nengca yerayisi ilula kakhulu, ke ziyafuneka zityhalelwe kwigumbi lokunyanzelwa ngenkani.
4. Umbane wokuqina wokomelela ngentsimbi, yamkela isantya esiguquliweyo sokuguqula ulawulo lokulawula isiqinisekiso somgangatho wepellethi.
5. Ukufa kwensimbi yealloy yenziwa ngumphambili we-German advanced drill gun kunye ne-American vacuum oven, Inobomi obude benkonzo kwaye iqinisekisa ngokusulungeka komoya kunye nomgangatho ophezulu.
6. Uhlobo lwentlawulo yembuyekezo yoqoqosho oluqhubekekayo olwenziwa kumazwe aphesheya luyinoveli kunye nolwakhiwo lwe compact, ukhuseleko, ingxolo ephantsi kunye nengxaki ephantsi.
7. Isixhobo sombane esisigxina sinokuwasusa ukungcola kwinkqubo ye-pelletizing.
I-Ring Die Pellet Mill yeeNxalenye zeMihlaba eziSaiti( abaqengqelekayo, uyafa, iqokobhe eliqengqelekayo)
Zeziphi izixhobo ezinokuthi ziThengiswe ngeRing Die Wood Pellet Machine?
Phantse yonke into enamahlathi kunye nezinto ezingafunwayo zenkunkuma zingenziwa kwiipellethi zokhuni ngomatshini wethu wokufakelwa kweendandatho, njenge: Iinkuni Chip, Ukucheba, Isawdust, Igobolondo emnyama, I-Biogases zeswekile, I-Shell Caster / Isiqu, Ikofu Husk, Umdaka kaPaddy, Isiqu seLanga, Imigca yeCotton, Inkunkuma yeCuba, I-mustard Stalk, Inkunkuma yeJute, Uthuli lwe bamboo, Inkunkuma yeti, Ingca yevili, Khumbula Palm, Iimbotyi zakhumbula, I-Coir Pitch Bark / Straws, Irayisi Husks njl. Iipheliti zokugqibela zinokusetyenziselwa ii-boilers zemizi-mveliso kunye nezityalo ezikhulu zamandla kunye nokushushubeza kwasekhaya.
Ukuchazwa kweRing die Pellet Mill
(h / h)
1~ 1.5 1.5~ 2,5 2~ 4 3~ 6 6~ 10 10~ 15
(kw) 22 30 37 55 110
0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
(kw) 2.2 2.2 2.2 2.2 5.5
250 300 320 350 420 508
Umboniso we-ring die pellet mill
Iselula / whatsapp / wechat：008613653820230